Momba anay - Shijiazhuang SD Company Ltd.
Niorina tamin'ny taona 1996, Shijiazhuang SD Company Ltd. ("SD Company") dia niasa tamin'ny varotra sy ny orinasa mpamokatra entana nandritra ny 20 taona ary ankehitriny dia manana mpiasa 12 ao amin'ny biraon'ny foibe any Shijiazhuang ary mpiasa maherin'ny 200 ao amin'ireo ozinina ao Hebei Faritany, Sina tanibe.
Tamin'ny faran'ny taona 2021 dia nahatratra 10 tapitrisa Dolara amerikana ny vola miditra rehetra.
Andriamatoa Wang Kaijun, ny CEO sy ny tompon'ny SD Company dia manana traikefa matihanina mihoatra ny 50 taona ary mpisava lalana amin'ny famokarana fitaovana any amin'ny faritanin'i Hebei izy.
Fitaovana milina sy fitaovana mandroso ara-teknika, SD Company dia nanjary fantatry ny indostria ary iray amin'ireo mpanondrana lehibe ny vokatra fencing utility any Shina. Ny vokatra fefy azontsika azo namboarina mba hifanaraka amin'ny faritra samy hafa sy ny tsena ho an'i Amerika Avaratra, Aostralia, Eoropa ary Israel.
Mpilalao lehibe ao amin'ny orinasam-pamokarana fampiasa any Etazonia izahay izao. Manana 5% ny sandan'ny tsena T Post sy ny dingana 30% amin'ny Poly Fence Post any Etazonia izahay ary ao anatin'ireo kaonty lehibe ao anatinay ny Home Depot, ary Menards.
Ny lisitry ny vokatra dia misy:
Paositra elektrika, tanana vavahady, insulator
T Post, Y Post, U Post sns ho an'ny tsena US, Europe ary Mid-East
Wire Meshes: Welded Mesh, Chain Link, Hex Mesh ary Vinyl Mesh
Panels amin'ny fefy: takelaka avo làlana, takela-by
Fefy vonjimaika: làlana sy fanamboarana
Gates: vavahady miasa sy haingo
Fitaovana zaridaina: harona mihantona
Ny dian-tongotra dia saika manerana an'izao tontolo izao, nanatrika seho marobe isan-taona izahay, toy ny CANTON FAIR any Shina, Fence Tech any Etazonia, THABS ---- Afrika Atsimo, MITEX ---- Russia ary seho fivarotana any Aostralia.
Mieritreritra mialoha ny mpanjifa izahay; manome serivisy faratampony, manana ekipa Mahafantatra miaraka amin'ny fahaiza-manao R&D, fanatsarana ary fanavaozana izahay.
Manaraka ny fitsipiky ny fandraharahana fototra 'Manome vokatra ambony kalitao amin'ny serivisy tsara indrindra', ny entana entinay dia malaza be any ivelany misy laza malaza. Nametraka fifandraisana ara-barotra amin'ireo firenena sy faritra manodidina ny 20 izahay. Raisinay an-tanan-droa ny karazana fangatahana fandraharahana, fiaraha-miasa sy varotra.